Posted by Kaung Kin Ko at 5:52 PM
ဟုတ်တယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ အလယ် အလတ်ပေါ့။ အရာအားလုံးတော့..အကုန်ပွင့်လင်းလို့ဘယ်ရ ပါ့မလည်း။ Mel Gibson ရဲ့ what women want ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်လေး ထဲ ကလိုပေါ့။
၁။ The Last Leave ကိုအရမ်းကြိုက်တယ်။
၂။ ပြန်အမ်းတဲ့ငွေ ၁၅၀၀ ပြည့်ရင် Beer တိုက်ခိုင်းမယ် စဉ်းစားထားတာ..အခုတော့ :(။
၃။ အစ်ကို့မျက်မှန်က Emporio Armani လား၊ Mont Blanc လား? :P
ကောင်းတယ်အစ်ကိုရာ တင်ပြပုံ။ :)
နောက်ကြုံရင် မျက်မှန်လေး ခဏဌားပါဗျာ..
အဲဒီမျက်မှန်ကြီးတပ်ပြီး လူကိုစိုက်မကြည့်နဲ့ ဗျ
လေးနက်သော အတွေးစကားများကို ပုံဖော်ထားခြင်းပါပဲ။ ဘုရားပြောထားတဲ့အတိုင်း မှန်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ဆိုသော အချက်များအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးမှသာလျင် အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်မိပါတယ် :)
ဘယ်လို ချီးကျူးစကားတောင် ဆိုရမလဲ မသိဘူး… ကောင်းလွန်းလို့အဲဒီနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ စကားလုံးရှာရတာ အတော်ခက်တယ်… မယုံရင် ဒီကော်မန့် ကို မျက်မှန်တတ်ပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်… ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မင်းလူ ၀တ္ထုလေးတပုဒ်သွားသတိရတယ်… လိမ်တာစမ်းတဲ့စက်ကလေးအကြောင်း… နောက်တော့ အဲဒီစက်ကလေးကို အဝေးလွှင့်ပစ်လိုက်တာပဲ… အင်း… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုရင်သုံးလို့ ရအောင် အဲဒီမျက်မှန်တလက်တော့ လိုချင်သား… ဥပမာ… အင်တာဗျုးလိုနေရာမျိုးပေါ့… ကိုယ့်ကို ခန့် မခန့် တခါထဲ သိရော… အမြဲတော့ တတ်မထားသင့်ဘူးလေ… ဒါဆို လောကကြီးက ရင်ခုန်စရာကောင်းတော့မှာ မဟုတ်ဘူး…
ရင်ထဲမှာ စဉ်းစားစရာလေးတွေ ကျန်ရစ်ပြီဗျို့ ...။ thank you. ^_^
I like it so much bro,